Instagram ကိုဘယ်လို Hack ရမလဲစစ်တမ်းမရှိ၊
နေအိမ် ဖုန်းကို Hack စစ်တမ်းမရှိဘဲနှင့်အတည်ပြုခြင်းမရှိပဲ Instagram အကောင့်များနှင့်စကားဝှက်များကိုဘယ်လို Hack မလဲ။
Instagram သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်သုံးစွဲသူ ၂၆ သန်းကျော်ရှိသည့်အထိရောက်ဆုံးနှင့်ထင်ရှားသောလူမှုမီဒီယာပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတွေက Instagram ID ကိုဘယ်လို hack မလဲဆိုတာကိုမကြာခဏတွေးမိတတ်ကြသည်။ Instagram အကောင့်များနှင့်စကားဝှက်များကိုမည်သို့ hack ရမည်ကိုလေ့လာခြင်းကသင့်အားလုံခြုံမှုရှိစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သင်၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက်စွဲများနှင့်အသေးစိတ်ပရိုဂရမ်းမင်းကုဒ်များထဲသို့သင်၏ခေါင်းကိုမထည့်ဘဲ Instagram အကောင့်ကိုမည်သို့ hack ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပါမည်။ ဒါ့အပြင်လူ့စိစစ်အတည်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများမလိုအပ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်အကောင်းဆုံး Instagram အကောင့်ဆော့ဝဲလ်ဟက်ကာများ၏လက်တွေ့အတွေ့အကြုံကိုရယူလိုပြီးအသေးစိတ်ကိုလေ့လာလိုပါကသွားရောက်ကြည့်ရှုပါ Minspy Demo ကိုသုံးပါ။ အသုံးပြုသူအတွက်အဆင်ပြေသော interactive interface သည်သင့်အားထိုအရသာကိုပေးသည်။
အပိုင်း ၁ - စစ်တမ်းမရှိဘဲ Instagram အကောင့်ကိုဘယ်လို Hack မလဲ။
၁.၁ Instagram Passwords များကိုဟက်ရန်အတွက် Minspy - Perfect Keylogger App ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်
၁.၃5TT မှတဆင့် Instagram ကိုဘယ်လို Hack မလဲ။
အပိုင်း ၂။ လူ့အတည်ပြုချက်မပါပဲ Instagram Password ကိုဘယ်လို Hack မလဲ။
၂.၁ Spyic - Instagram Passwords ကိုဟက်ကာလုပ်သည့်သင်၏ရာသီဥတုအခြေအနေအကုန်လုံး
၂.၂ ၂။ Spyic သည် Instagram အတည်ပြုချက်မရရှိပါက Instagram စကားဝှက်များကိုမည်သို့ hack နိုင်သနည်း။
အပိုင်း ၃။ Instagram ဒေါင်းလုပ်မပါဘဲ Instagram အကောင့်ကိုဘယ်လို hack မလဲ။
၃.၁ Instagram ကို Hack ရန် Cocospy Solution သည် Software Download မပါပဲ
၃.၂ Cocospy သည် Instagram အကောင့်ကိုမည်သို့ hack သနည်း။
Instagram ကို Hack ယခုအင်တာနက်လောကမှာပူပြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ၏ Instagram စကားဝှက်ကိုစစ်တမ်းမပါပဲရယူရန်လျှောက်လွှာအသစ်ကိုတီထွင်နေသည်။
ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသောလူများသည် Instagram အကောင့်များကိုမည်သို့ hack ရမည်နှင့်အဆုံးမဲ့အဆုံးသတ်လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုတွင်မည်သို့ဖမ်းဆီးနိုင်မည်ကိုရှာဖွေရန်အွန်လိုင်းမှရှာဖွေကြသည်။ သို့သော်စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့သည် Instagram အကောင့်များကိုဟက်လုပ်ခြင်းအတွက်ထိပ်တန်းအက်ပလီကေးရှင်းများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းများကိုရရှိခဲ့သည်။
Minspy သည်နာမည်ကြီးတံဆိပ်မှအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်အရင်ကမကြားရသေးဘူးဆိုရင်ဒီနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပေါင်း ၁၉၀ ကျော်မှာတည်ရှိပြီးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကုန်လွန်ခဲ့သောကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ၎င်းတွင်လူသန်းပေါင်းများစွာထံရောက်ရှိနေပြီးတိုးတက်နေဆဲဖြစ်သောကျယ်ပြန့်သောသစ္စာရှိဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းရှိသည်။
ထိုကဲ့သို့သောထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောအကြီးမားဆုံးမီဒီယာအချို့အားဖြင့်၎င်း၏ features တွေနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသော၎င်း၏ရေပန်းစားသည် Forbes မဂ္ဂဇင်းနည်းပညာအကြံပေးနှင့် နေပြည်တော်.
Minspy သည် Instagram hacking စစ်ပွဲကိုအနိုင်ရသည့် application ဖြစ်သည်။ Minspy Live Demo ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ နှင့်သင်အဘို့၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောအင်္ဂါရပ်များစူးစမ်း။ ၎င်းသည်အကွက်အားလုံးကိုစစ်ဆေးပြီး Instagram အကောင့်များထဲသို့ ၀ င်ရောက်ရုံထက်မကပြုလုပ်သည်။
ဝဘ်အခြေပြုမျက်နှာပြင် ဒီ hack ရဲ့အကောင်းဆုံးအရာကသင့်ရဲ့ PC (သို့) စမတ်ဖုန်းမှာ app တစ်ခုကို install လုပ်စရာမလိုဘူး။ ၎င်းကို dashboard မှတဆင့်ထိရောက်စွာလည်ပတ်နိုင်သောကြောင့်မည်သည့် browser ကိုမဆိုဖွင့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာအားဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်အခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောခြိမ်းခြောက်မှုများမှကာကွယ်ရန်သေချာသည်။
Root (သို့) Jailbreak မရှိပါ Minspy သည် rooting နှင့် jailbreaking မပါဘဲ Android နှင့် Android ရှိ Instagram account များကို hack နိုင်သည်။ ၎င်းသည်တကယ့်ကိုထူးခြားတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ jailbreaking သို့မဟုတ် rooting လုပ်ခြင်းဖြင့်သင့်ဖုန်းကိုပျက်စီးစေနိုင်သည့်ထိုကဲ့သို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများစွာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
100% လုံခြုံစနစ်ဟုတ်ကဲ့၊ Minspy တွင်လုံခြုံရေးအခြေအနေများပါ ၀ င်သည်။ အသုံးပြုသူအချက်အလက်များကို၎င်း၏ဆာဗာများပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။ ၀ န်ထမ်းများပင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှု။ မရပါ၊ Minspy ကိုရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ရာခိုင်နှုန်းလုံခြုံသောလျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
အင်္ဂါရပ် ၃၀ ကျော်: keylogger သည် Minspy မှကမ်းလှမ်းသောကြွယ်ဝသောစွမ်းဆောင်ချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသံခေါ်ဆိုမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ IM chat ဒေတာကိုထုတ်ဖေါ်ခြင်းနှင့်တစ်စုံတစ်ယောက်၏တည်နေရာကိုသိခြင်းမှသင်လုပ်လိုသည်အတိုင်းလုပ်ဆောင်သည်။
အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိခြင်းသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုရှိပြီး၎င်းကိုသုံးနိုင်ပြီးလိုချင်သောရလဒ်များကိုရရှိခြင်းသည်နောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Minspy သည်အဓိကစမတ်ဖုန်းလည်ပတ်မှုစနစ်များဖြစ်သော Android နှင့် iOS အတွက်တူညီစွာအလုပ်လုပ်သည်။
Android စမတ်ဖုန်းတွင် Instagram မရှိကြောင်းစစ်ဆေးခြင်း။
Android တွင် Minspy ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်၊ အရွယ်အစား <3MB) ကိုအလွန်သေးငယ်သော application တစ်ခုကိုထည့်သွင်းရပါမည်။ ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်၎င်းတွင်သဲလွန်စများကိုဖယ်ရှား။ နောက်ကွယ်မှဖုံးကွယ်ထားခြင်းကိုမရရှိနိုင်ပါ။
အောက်ပါလွယ်ကူသောအဆင့်များက Android device တွင် Minspy ကိုသတ်မှတ်ပြီး logged keys အားလုံးကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။
အဆင့် ၁: Minspy ကိုစာရင်းသွင်းပါ
အခမဲ့ Minspy အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပါ နှင့် sign up ။ သင်၏တက်ကြွသောအီးမေးလ် ID ကိုသင်၏အသုံးပြုသူအမည်အဖြစ်သာအသုံးပြုပါ။ ပြီးတာနဲ့၊ သင်လိုအပ်တဲ့ကိုက်ညီတဲ့ subscription ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ပရီမီယံဗားရှင်းသည်ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်လုံလောက်ပါသည်။
အဆင့် ၂ - သူလျှိုလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့ဖုန်းမှာတည်ဆောက်ခြင်း
ပစ်မှတ်ပလက်ဖောင်းကို Android နှင့် ထား၍ ထည့်သွင်းပါ Minspy Android လျှောက်လွှာ ၎င်း၏ keystrokes စတင် hack ရန်ပစ်မှတ် device ကိုပေါ်မှာ။ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိစေရန်၎င်းကိုသင်တပ်ဆင်ပြီးနောက်ချက်ချင်းဖုံးကွယ်နိုင်သည်။
အဆင့် ၃ - Instagram အချက်အလက်ရယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ
Mobile Instagram လှုပ်ရှားမှုကိုခြေရာခံရန်သင်လိုအပ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုသင်၏အကောင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီးမှော်အတတ်ကိုကြည့်ပါ။
၎င်းသည် utopian အတွေးအခေါ်ဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းကိုသင်သိရသောအခါသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။
အက်ပလီကေးရှင်းရှိ Instagram အကောင့်ကိုဖောက်ထွင်းခြင်း
Minspy ဝဘ်ဆိုက်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ သုံးစွဲသူအဖြစ်တက်ကြွသောအီးမေးလ်လိပ်စာကိုသုံးပြီးစကားဝှက်တစ်ခုကိုရွေးခြင်းအားဖြင့်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းတိုတောင်းတဲ့ပုံစံပဲ။
အက်ပလီကေးရှင်း၏ iOS မူကွဲကိုရွေးချယ်ပြီးသင့်ပစ်မှတ်၏ iCloud အထောက်အထားများကိုထည့်ပါ။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုဆော့ဖ်ဝဲကို install ဖို့မလိုအပ်ပါ။
iCloud အထောက်အထားများကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်သင် setup လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပြီးပါပြီ။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအတည်ပြုချက်ကိုသင်ရရှိမည်။
ဒါပါပဲ! သင်ကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်သည့်အတိုင်းမည်သူမဆို၏ Instagram အကောင့်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းသည် Minspy ဖြင့်ဘယ်တော့မျှလွယ်ကူမည်မဟုတ်ပါ။
Captcha အတည်ပြုချက်သည်ယနေ့ခေတ်တွင်အလွန်အသုံးများလာသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများက use ည့်သည်များသည်တကယ့်လူ (သို့) စက်ရုပ်ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးရန်သူတို့ကိုသုံးသည် အကြမ်းဖက်မှုမှတစ်ဆင့် Instagram အကောင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါ၎င်းသည်အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်သည်။
Spyic သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိသန်းပေါင်းများစွာသောအသုံးပြုသူများကိုအများဆုံးအသုံးပြုသော Instagram hack တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားကမ္ဘာ့မည်သည့်နေရာမှမဆိုမည်သူမဆို၏ Instagram အကောင့်ကိုအပြည့်အဝရယူနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာအသုံးပြုသူကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုဘဲဤအရာအားလုံးကိုသတိရှိရှိဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ စစ်ဆေးပါ သူလျှိုတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် စာမျက်နှာ၏၎င်း၏အံ့သြဖွယ် features တွေအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
Spyic တွင်အသုံးပြုသူပြုလုပ်ထားသော keystroke တိုင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီး cloud ထဲတွင်လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားသည့်အထူး keylogger လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။ ၎င်းအချက်အလက်များကိုတက်ဘလက်၊ စမတ်ဖုန်းနှင့်လက်တော့ပ်များအပါအဝင်မည်သည့်အင်တာနက်ကိုသုံးသည်ကိုမဆိုအလွယ်တကူရယူနိုင်သည်။
ပစ်မှတ်ဖုန်းပေါ်ရှိမည်သည့်ခလုတ်ခုံများကိုအသုံးပြုသည်ကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန်သင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သော interface ရရှိသည်။
အဆင့်မြင့် Android နှင့် iOS စမတ်ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောထိုဖြေရှင်းချက်ကိုပလက်ဖောင်းနှစ်ခုလုံးမှအလွယ်တကူထောက်ခံနိုင်သည်။ ထို့အပြင် app သည် stealth mode တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
Spyic iOS solution သည် jailbreak မလိုဘဲ target device ၏ iCloud အထောက်အထားများနှင့်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သည်။
Spyic Android ဖြေရှင်းနည်းများနှင့် Instagram password ကိုလူ့အတည်ပြုချက်မပါပဲ hack ရန်အတွက် ဒီ installation လမ်းညွှန်ကိုလိုက်နာပါ နှင့်မှော်ဆက်ရေးစောင့်ကြည့်။
Instagram အကောင့်ကို hack ဖို့အချိန်ရောက်လာရင်ဖုန်းကို download ဆွဲစရာမလိုတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေရပါမယ်။ ၎င်းသည်အချက်အလက်ချိုးဖောက်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးထာဝရပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဒါက Instagram အကောင့်ကို hack ဖို့အတွက်လူကြိုက်များတဲ့နောက်ထပ်ကိရိယာတစ်ခု။ အခြားအက်ပ်များကဲ့သို့ setup လုပ်ငန်းစဉ်သည်အတော်လေးရိုးရှင်းပြီးသင့်ဖုန်းတွင်မည်သည့်ဆော့ဝဲလ်ကိုမှ download လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ရိုးရိုး UI အပြင်အပြင်အင်္ဂါရပ်အားလုံးပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ Cocospy မှတစ်ဆင့် Instagram အကောင့်ကိုမည်သို့ hack ရမည်ကိုရှာဖွေရန်အင်တာနက်ကိုသင်ရှာဖွေရန်မလိုအပ်ပါ။
မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်ကိုမဆို hack ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာရှည်လျားပြီးလိုက်လံတပ်ဆင်ခြင်းအဆင့်များကိုမလုပ်ဆောင်ဘဲ Cocospy ကဲ့သို့သောသူလျှိုအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Cocospy ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားကြည့်ပါ ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များအားလုံးလေ့လာသင်ယူရန်။
Cocospy နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်မယ့်အချက်ကတော့ -
အချက်အလက်များကို ၂၇ × ၇ အထိအဝေးမှကြည့်ရှုနိုင်သည်
သင်၏ hacking လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်အင်္ဂါရပ် ၃၀ ကျော်
Cocospy ဟာသင်တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ Instagram အကောင့်ထဲဝင်ခွင့်ပြုရုံထက်မကလုပ်နိုင်တယ်။ ဤတွင်အသွင်အပြင်လက္ခဏာအပြည့်အစုံပါ။
စစ်တမ်းမပါဘဲ Instagram ကိုမည်သို့ hack ရမည်ကိုသင်စဉ်းစားနေပါကဤလမ်းညွှန်သည်သင့်အားအမှန်ကူညီလိမ့်မည်။ သင်လုပ်ရန်မှာဤနည်းလမ်းကိုကြိုးစားပြီးနောက်လူတို့နောက်ကွယ်တွင်ဘာပြောနေသည်ကိုမြင်ပြီးသင်အလိုရှိပါက၎င်းတို့ကိုအံ့အားသင့်စေခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အဖြေများမှာ Instagram ကိုလူ့အတည်ပြုချက်မပါဘဲ hack ရုံထက်မကပါ။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့ဘာမှ root သို့မဟုတ် jailbreak access မလိုအပ်ဘူး။ ၎င်းတို့သည် ၁၀၀၁TP1T လုံခြုံစိတ်ချရသော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှလာပြီးကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိစိတ်ကျေနပ်မှုရှိသောဖောက်သည်များအသုံးပြုကြသည်။
ယခင်ဆောင်းပါးလိမ်လည်သူများကိုဘယ်လိုဖမ်းရမလဲ - ဆဲလ်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်း ၁၀ ခု
နောက်ဆောင်းပါးအကောင်းဆုံး Facebook Hack ဆော့ဝဲလ် ၁၀